Khasaarooyin shuruudaha - tani u muuqataa midig - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · Khasaarooyin shuruudaha - tani u muuqataa midig
Khasaarooyin shuruudaha - tani u muuqataa midigSheegashada Magdhawga ka dhanka ah shirkadda Malmö koraan laga yaabaa in aheyn. Laakiin sida loo xisaabiyo, ninna ma run ahaantii waa ogyahay. Ma jiro tusaale in la ila barbardhigo.
Ilaa hadda, ka dibna, waxaa jira dalab magdhow ah 200 milyan oo ka mid ah laba xarumo warbaahineed, kuwaas oo channels sii gudbiyo via sanduuqa ATN ah. Waxaa aad u badan tahay in shirkadaha dheeraad ah u baahan doonaa bedelkiisa. Laakiin sida ay tahay in magdhowga loo xisaabin haddii kiiskan maxkamad tagaa?
- Ma jiro wax jawaab cad, ayaa sheegay in xeerilaaliyaha Henrik Rasmusson.
- Dembi retransmission The aan la ogalayn ee channels TV ayaa isku dayay in aan la hor barxadaha Swedish. Oo mid u xisaabin karaa siyaabo kala duwan. Ma jiro template go'an.
Waxaa jira dhawr arrimood oo kala duwan in ay maxkamaddu ka mid noqon kara in ay xisaabinta:
- Wakhti intee le'eg ayay oo dhan joogay.
- Hawlgallada Sidee ballaaran faafinta lahaa.
- Qiimaha in dacwoodayaashu qabaa in ay adeeg waa.
- Imisa qof daawaday.
- Waa maxay waxa ay ku kici doonto macaamiishu waxay si toos ah uga channels ka helaan adeeg isku mid ah.
Marka milkiilayaasha Pirate Bay ayaa lagu xukumay isagoo awood u dajinta ee wax koobigeyda sida ay loo baahan yahay ay ka mid yihiin magdhow ah ee ka yar 50 million. Markaas waxa uu ahaa ku saabsan sida weyn shirkadda khasaaraha film iyo music u sameeyey markii dadkii soo bixi movies iyo CDs halkii iyaga iibsato. Markan waxa ay ku saabsan tahay oo dhan TV-channel Total Doorashada oo la geeyay by shirkad kaas oo la sheegay in aan xaaladda. Ka dibna waxa ku jiri doona lacago aad u balaaran.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skadestandskraven-sa-funkar-det11.11.2016. 20:50	Categories